သီတဂူ အလှူတော် ~ တက္ကသိုလ်ရဟန်းကမ္ဘာ
Welcome To My Website From Buddha, Dhamma,and Samgha are for all of you Buddha, Dhamma and Samgha are for all of you Hello Welcome to my website This is my first project
The life of light through of itself
Let's listen to the Dhamma talk
The Buddha is wonderful and measureless in this world
I pay homage to the Buddha, the Dhamma, and Samgha.
ရေမြေသမုဒ်၊ မိုင်တွေထုတ်၍၊ ဝေးရေခြား၊ ရောက်နေပါလည်း၊ အမေ့ကျေးဇူး၊ မမေ့သက်သေ၊ မင်း...တည်စေသော်၊
Composed By Ven.Punnavamsa (1)
Composed by Ven.Puññavaṃsa (1)
Edited By Ven.Punnavamsa (2)
Lectured By Ven.Punnavamsa (1)
Presented By Ven.Punnavamsa (4)
Represented by Ven.Punnavamsa (2)
This is my representive of Kamma theory (1)
Writing By Ven. Punnavamsa (4)
တရားမှတ်ခြင်း ၁ (3)
တရားမှတ်ခြင်း ၂ (2)
တရားမှတ်ခြင်း ၃ (1)
ပုည(ရာမည) မှ ရှယ်ယာလုပ်ပေးပါသည်။ (1)
ဆောင်းပါး ၁ (7)
ဆောင်းပါး ၂ (2)
ဆောင်းပါး ၃ (2)
12:02 AM ဓမ္မအလင်္ကာဝတ်ရည် 1 comment
“ နာမကျန်းသူတို့အား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်၊ ငါဘုရားအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း” ဆို သည့် ဘုရားဟော ဆုံးမစကားနဲ့ အညီ သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်မှု့ဖြင့် သီတဂူ သာသနာပြု အဖွဲ့၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သော မျက်စိဒါန အာရောဂျဒါနဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်နေမှု့ကို တင်ပြပေးချင်ပါသည်။
သီတဂူ အာရောဂျဒါန စက္ခူ့ဒါန ဆိုတဲ့ ဆေးရုံတွေ ဖွင့် လှစ်ကာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှု့တွေကို ပြုလုပ်ပေးနေသည်မှာ အခုဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်/တိုင်း အသီးသီးတို့တွင် သီတဂူဆေးရုံပေါင်း (၁၄)ရုံထိ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ပါသည်၊
ယ္ခုဆေးရုံ (၁၄) ရုံမြောက် ဆေးရုံကို ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူ အထူးဒေသ စုံနံ့သာမြိုင်ရွှေမြို့တော် တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၄) ရက်နေ့ တွင် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပထမပိုင်း အစီအစဉ်ကို စတင်ရာ မနက် (၈)နာရီတွင် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရာ မဏ္ဍပ်တွင်း၌ နေရာယူကြပြီး သီတဂူဆရာတော်ကြီး ကြွရောက်လာကာ နမောတဿ (၃) ကြိမ်ရွတ် ဘုရားရှစ်ခိုးကာ အခမ်းအနားကို စတင်လိုက်ပြီး သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူကြသည်၊ ကြွရောက်လာကြသော သံဃာတော်များက မေတ္တာသုတ်၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၊ပုဗ္ဗဏှသုတ်များ ရွတ်ဆိုကြပြီး၊ မြိုင်ကြီးငူ ဓမ္မစင်္ကြာ အဖွဲ့သူများ ဓမ္မဂီတတေးကဗျာကို ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါသည်၊ ထို့နောက် ဓမ္မစင်္ကြာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူက သီတဂူ-မြိုင်ကြီးငူ အာရောဂျဒါန ဆေးရုံတော် တေးထပ်ကို သီဆိုပူဇော်ပါသည်၊ သံဃာတော်များကို လှူဖွယ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးမှ အနုမောဒနာ တရားချီးမြှင့်ပါသည်၊
ဆရာတော် ချီးမြှင့်သော တရားတော်မှာ တတိယ ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဒီပဲရင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ အဘိဓမ္မာအဖွင့် ကျမ်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပဌမတ္တ စက္ခု့ဆိုတဲ့ ကျမ်းထဲက ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ ဘုန်းကြီး ရဟန်း(၃) ၀ါထဲက ကျက်မှတ် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ “ငါသည် သူတစ်ပါး အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါလို့၏။ ငါ၏ အကျိုးစီးပွားကို သူတစ်ပါးကလဲ ဆောင်ရွက်ရပါလို၏။” “ငါသည်ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ပါရစေနဲ့။ ငါဒုက္ခရောက်အောင် လည်းဘယ်သူကမှ မလုပ်ပါစေနဲ့၊” နောက်ထပ်ဆုတောင်းတွေလဲ ဘုန်းကြီးမှာ ရှိသေးတယ်၊ အဲ့ဒီ့ဆုတောင်းတွေကို ငယ်ငယ်လေးထဲက တောင်းနေခဲ့တာ အသက်တော်လေး ကြီးပြီး ဒီနေ့ အချိန်ထိတော်တော် တန်တန်လေးပြည့်လာခဲ့သည်။ ဘာကြောင့် ပြည့်ရသလဲပြောရင် ဘုန်းကြီးတို့ သီတဂူ ဆေးရုံပေါင်း ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ သီတဂူ-မြိုင်ကြီးငူ အာရောဂျဒါန ဆေးရုံ အပါအ၀င် ဆေးရုံပေါင်း(၁၄) ရုံကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (၁၃) ခုမြောက်ဆေးရုံကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မှာ ဖွင့်လှစ်ပြီး တောင်တန်းသာသနာပြု ဆေးရုံအဖြစ် လှူထားခဲ့သည်၊ တောင်ပေါ်ဒေသ ၁၀မိုင် ၁၅မိုင် ၂၀မိုင် ၃၀မိုင် ဝေးတဲ့ တောကြိုတောင်ကြားတွေက ကုန်းကြောင်းလျှောက်ပြီး လာကြတဲ့ သွေးချင်းသားချင်း ညီကိုမောင်နှမတွေမှာ မြန်မာစကားကို လူ၁၀ယောက်လာလျှင် ၃ယောက်လောက်သာ ပြောနိုင်ကြတယ်၊ တောင်ပေါ်က ဆင်းလာကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ သူကလဲ ၁၀ယောက် တစ်ယောက်ပါဖို့ ခဲယဉ်းတယ်၊ အဲဒီ့လူတွေ အားလုံးလူပေါင်း(၄၀၀၀)ကျော်ပါတယ်၊ ထပ်မံ စစ်ဆေးမှု့တွေ လုပ်ကာ ကုသပေးခဲ့ကြပါသည်၊
ဒီဆုတောင်းတွေကို ဆက်လက်ဆုတောင်းနေဆဲပါ၊ ဒီထက်တိုးပြီးတော့ ဆောင်ရွက် နေရအောင် ဆုတောင်းတွေကို တိုးပြီး တောင်းနေရမှာပါ။နောက်ထပ်လဲ သီတဂူ အာရောဂျဒါနဆေးရုံတွေ ကိုလဲ တိုးတိုးပြီး ဖွင့်လှစ်သွား နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာရယ်၊ ငါသည် သူတစ်ပါးအကျိုး စီးပွားကို ဖြစ်နိုင်သလောက် တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေကို မွေးမြူကြပါလို့ မိန့်ဆိုသွားပါသည်၊
မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ကြီး၏ ရွှေပြည်ဝင် တပည့်များဖြစ်ကြတဲ့ DKBA ဒကာ/မများက ပေါင်းစုပြီး ဆေးရုံ အဆောက်အဦး အတွက် ကုန်ကျငွေ သိန်းပေါင်း(၃၀၀၀)ကျော်နှင့် သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် သီတဂူ သာသနာပြု အဖွဲ့က ဆေးရုံ အတွက် သိန်ပေါင်း (၃၅၀၀)ကျော် တန်ဘိုးရှိ ဆရာဝန်သုံး၊ လူနာသုံး၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် ရောဂါ စမ်းသပ်ကုသရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဓါတ်မှန်စက်များ၊အထွေထွေ ခွဲစိပ်ခန်းနှင့် မျက်စိခွဲစိပ်ခန်း နှစ်ခန်းအတွက်ပါ ပစ္စည်းကိရိယာ အပြည့်အစ၊ုံ 100-KVA အားရှိ Cummis- အမျိုးအစား လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက် အသစ်ကိုလည်း တပ်ဆင်မောင်းနှင်နေပြီး တိကျပြည့်ဝသော လျှပ်စစ် ဓါတ်အားကိုရရှိစေပါသည်၊စုစုပေါင်း သိန်း(၆၅၀၀) ကျော်တန်ဘိုးရှိ သီတဂူ-မြိုင်ကြီးငူ အာရောဂျဒါနဆေးရုံ နှင့် ပစ္စည်းအားလုံးကို သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့် မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်တို့က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ လွဲပြောင်း အပ်နှံ လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်းကိုပါ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ရေစက်ချတရား ဟောရင်းမိန့်ဆိုသွားပါသည်။
ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်ကို ဆေးရုံရှေ့ မျက်နှာစာတွင်ကျင်းပရာ ပြည်နယ်သံဃာနာယက ဥက္ကဌဆရာတော်၊ ပြည်နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီး၊DKBA ,BGF ခေါင်းဆောင်၊ အင်္ဂလိကန်နယ်စည်း သာသနာပိုင်၊ ရွှေဂွန်းအောက်ဗလီဆရာ တို့က ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး။ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်က ဆိုင်းဘုတ်ကို စက်ခလုပ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်၊ ထိုအချိန်တွင် DKBA,BGF အဖွဲ့မှ အမြှောက်(၉)ချက် ပစ်ဖောက်၍ ဂုဏ်ပြုပါသည်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆေးရုံနှင့် ပတ်သက်သော စာရွက်စာတန်းများကို သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကိုလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ပါသည်၊ သီတဂူကျောင်းအမကြီး ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်အေး မှအလှုငွေ သိန်း(၁၀၀)၊ သီတဂူ သာသနာပြုအဖွဲ့မှ လှုဒါန်းငွေ (၆၅)သိန်းတို့ကို ပေးအပ် လှူဒါန်းကြပါသည်၊ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၊ အမှတ်(၁၀၂၂) နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းမှ တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးမုတ်သုံ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း တို့မှဝမ်းမြောက်စကား များပြန်လည်ပြောကြားကြပါသည်၊
ဧည့်သည်တော်များအား ဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အလံနှင့် ရိုးရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ပြီး ဆေးရုံတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှု့ကာ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်၊
ကျမတို့လည်း ဆရာတော်ကြီးကို သွားေ၇ာက် ဂါရ၀ပြု နုတ်ဆက်ကာ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာကြပါသည်၊ အပြန်လမ်းပေါ်တွင် အတွေးဝင်လာသည်မှာ အခုလို ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့်တစ်ယောက် အနေနှင့် ဆရာတော်ကြီး လုပ်ဆောင်နေသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ တွင် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်မျှ ပါဝင်ခွင်ရသည့် ကျမသည် ဆ၇ာတော်ကြီး ဆုတောင်းသကဲ့သို့ ဆုတောင်းတွေကို ဆုတောင်းပြီး ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အရိပ်အောက်တွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို မိမိ စွမ်းအားရှိသလောက် ကူညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သံဓိဌာန်ချလိုက်ပါသည်၊
Posted in: ပန်းစပယ်(လှဆန်းယဉ်)
July 18, 2012 at 4:56 AM Reply
Posted by ဓမ္မအလင်္ကာဝတ်ရည် at 12:02 AM
Mary Grace July 18, 2012 at 4:56 AM
We are discussion about Dhamma when we meet with us.
We are going to discuss about the nature Dhamma asabeing and the element of nature for the purification of the truth and Nibbana. We find out final goal and pinnacle way of reaching Nibbana.
ဓမ္မအလင်္ကာဝတ်ရည် ပုည (ရာမညတိုင်း ဟံသာဝတီမြို့ ပဲခူး)
သင်္ချေလေးရပ် တသိန်းက ဒို့ဖခင်
“ နာမကျန်းသူတို့အား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်၊ ငါဘုရားအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း” ဆို သည့် ဘုရားဟော ဆုံးမစကားနဲ့ အညီ သီတဂူ ဆရာေ...
လောကကြီးမှာရှိကြသော လူသားတို့အတွက် ကောင်းကျိုးကိုသာရည်ရွယ်၍ ဤစာသားကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာပေကိုမြတ်နိုးကြသော စာပေပရိတ်သတ်...
အမေနေ့ အမေ့ဘ၀ အမေ့အကြောင်း
မာတာ ယတာ နိယံပုတ္တ၊ မာယုသာ ဧကပုတ္တ' မနုရက္ခေ။ ဧ၀မ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ ဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူအပ် ပါဠိတော်ကို ထောက်၍...
( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း ) ၁။ လူအမည်=သိဒ္ဓတ္ထ ၂။ ဘုရားဘွဲ့=ဂေါတမ ၃။ မိဘအမည်=သုဒ္ဓေါဒနမင်း နှင့် မဟာမာယာဒေ၀ီ ၄။ ကြင်ယာတော်=ယသေ...
မျက်မှောက်ခေတ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ Current age of World and Buddhism
ယနေ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးတွင် (Modern world) တိုးတက်မှုအတိုင်းတာအားဖြင့် ကြည့်မည်ဆို လျှင် လွန်စွာတိုးတက်နေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့တိုးတက်လာ...
ငါ့လက်ထဲက ထွက်ခွာသွားသော ကျည်ဆန်တစ်ချက်ဟာ အာကာဝေဟင် ကောင်ကင်ပြင်ကို ထိုးဖောက်လို့ လမင်းရဲ့ ဗဟိုတည့်တည့်ကို မှန်သွားသော်လည်း လမင်းဆီက ပြန်ကျလ...
ငါ့အတ္တရဲ့ ကမ္ဘာတွင်းမှာ အလင်းရောင်ပေးသော လမင်းလေးဟာ မင်းလေးပါလို့ သိတဲ့အချိန် ငါဟာ မင်းနဲ့ဝေးသောနေရာမှာပေါ့..။ ငါအထီးကျန်သော ညသန်းခေါင်ယံမှာ...
Emergence Of Buddhism Historical Background
Emergence of Buddhism historical Background Discuss whether the Aryans ledamundane life ...
This is representive of Kamma Theory
Introduction Every action has its reaction. This is the eternal law. Buddhism named it as Kamma. Kamma is...
Copyright © 2011 တက္ကသိုလ်ရဟန်းကမ္ဘာ | Powered by Blogger